Kedụ ka m ga - esi weghachite ibe m Yahoo? - Ajụjụ
Isi > Ajụjụ > Yahoo ibe edokọbara okụrede - olee otu ị si ekpebi
Yahoo ibe edokọbara okụrede - olee otu ị si ekpebi
Kedụ ka m ga - esi weghachite ibe m Yahoo?
Pịa menu ndọpụta ma họrọ ebe nchekwa makaedenyere aha giIbe weebụ. I nwekwara nhọrọ iji tinye nkọwa dị mkpirikpi. Pịa bọtịnụ 'Zọpụta' iji chekwaanke giibe edokwubara. Mgbe ịchekwaanke giBookmark, ị nwere ike ịnweta ya site nagị Yahoo!
Hi folks, taa, m na-aga na-egosi gị otú iji weghachi ma ọ bụ weghachi ndị okwuntughe gị Google Account Ọ bụrụ na ị na-na na na mberede ehichapụ na okwuntughe si nchọgharị gị na na ọ na-e synced na gị Google Account, ọ bụ ike ime ka ha dịghachi otú Aga m eme ya ngwa ngwa mepụta ọnọdụ ahụ wee gosi gị otu ị ga-esi nwetaghachi okwuntughe ndị ahụ. Odi mma ka anyi bido ...
M nnọọ ngwa ngwa ike dịruru ná njọ site ekpocha m cache gụnyere okwuntughe na mgbe ọ syncs na m Google akaụntụ nke m na-enweghị ike naputa ha. Naanị m na-egosi gị ndị a bụ okwuntughe m na akaụntụ google m, lee ị nwere ike ịhụ na nke a bụ akaụntụ google m ma e mekọrịta okwuntughe na ihe nchọgharị m ka m wee kpochapụ oghere m ngwa ngwa, m ga-ahọrọ okwuntughe ndị a iji mepụta ọnọdụ dị ka m tufuru ozi m niile gụnyere okwuntughe m wee laghachi wee hụ ebe m niile okwuntughe m apụla ma nke a bụ ihe nchọgharị m na ka anyị kwuo eziokwu ... lee nke a bụ akaụntụ google m ebe mgbanwe m dị na akaụntụ Google m Enweghị m ike iweghachite ya na nke ọ bụla gam akporo ma ọ bụ laptọọpụ m ngwaọrụ, yabụ m ga-egosi gị otu ị ga-esi weghachite ozi ahụ, yabụ ka anyị bido.
Ihe mbụ ị ga - eme bụ ịgbanyụ syncing maka nhọrọ ndị a niile na ntọala mmekọrịta gị na ihe nchọgharị gị. Ya mere, ihe nchọgharị a ga-adị na PC gị nke ị banyere na mbụ ma ọ bụ jiri Akaụntụ Google na PC tupu ị gbanye nhọrọ mmekọrịta ndị a wee kwụpụ na ịntanetị ka ọ bụrụ na mgbe ị weghachite okwuntughe, ọ gaghị edegharị ya site n'aka gị Akaụntụ Google na mmekọrịta a ọzọ ma ọ bụrụ na ịgbalite ya. M na-apụ na ịntanetị ugbu a anaghị m ejikọ na ịntanetị Ugbu a gaa n'ihu ma mechie ihe nchọgharị a ma ọ bụ nnọkọ ndị ọzọ Ọ bụrụ na ị mepere ha Ugbu a gaa ụzọ ahụ m na-agbakwunye ụzọ a na nkọwa dị n'okpuru ebe a ị hụrụ folda ahụ na data onye ọrụ n'okpuru google chrome ọ kwesịrị ịnwe ụdị ntọala nke ntọala gị na data google ozugbo pịa folda a ma gaa weghachite nsụgharị ndị gara aga.
Nke a bụ ndepụta nke nsụgharị ndị gara aga nke folda a, yabụ ị ga-ahọrọ ụdị nke dị tupu ihichapụ oghere ma ọ bụ ihichapụ okwuntughe, yabụ m ga-ahọrọ ụdị ọhụụ na otu ihe ma ọ bụrụ na ịnweghị ụdị nke gara aga ebe a a na m atụ egwu na ị nweghị ike iweghachite okwuntughe ndị a. Yabụ mgbe ịhọrọ folda ahụ, pịa Kagbuo ka m wee jụọ gị maka nkwenye ahụ. Ì ji n'aka na ị chọrọ iji weghachi gara aga version, ya mere ee, dabere na ole ozi ma ọ bụ ole data ị nwere na aga na version, gụnyere gị akụkọ ihe mere eme, okwuntughe, ọ ga-ewe oge iji nweta nchekwa nke ọma na ozi gara aga mbipute weghachiri, mma dịkwa mma wee mepee Google Chrome ọzọ wee laghachi na ntọala.
N'ebe a, ị ga - ahụ na agbanyere mmekọrịta ahụ ka anyị weghachite nhọrọ mmekọrịta data wee lelee na anyị nwetara okwuntughe azụ. Ee, enwere m okwuntughe ebe a, mana kwụpụ na ịntanetị. Ọ bụrụ na ị jikọọ ya ugbu a ị ga-atụfu ya ọzọ dịka a ga-esi mekọrịta ya na akaụntụ Google gị, mekọrịta ya na akaụntụ Google (nke m), yabụ a gaghị ehichapụ ya ọzọ, ka m wee nwee mgbanwe ụfọdụ na ndepụta a nke mere na Google na-ahụ nke a dịka ndepụta okwuntughe kachasị ọhụrụ na timestamp kachasị ọhụrụ yana ihe nchọgharị a na-emekọrịta ya na akaụntụ Google gị, ọ bụghị nke ọzọ.
Yabụ họrọ otu n'ime ndenye ma mee mgbanwe ụfọdụ, dịka ọmụmaatụ na nke a ebe a enweghị m aha njirimara na ndepụta a, m ga-aga n'ihu wee wepụ ya ka e wee nwee mmelite timestamp nke ozi ahụ yana mmekọrịta Google na ozi m. Aga m eme nke a maka ntinye a ma ọ bụrụ na enweghị aha njirimara ya mere ugbu a enwere m ụdị okwuntughe kachasị ọhụrụ ma jikọọ na ịntanetị ka m wee jikọọ na ịntanetị ugbu a, ee, ejikọrọ m ugbu a wee laghachi na ntọala wee banye ọzọ, lee, m abanyela ọzọ mana mmekọrịta ka nwere nkwarụ yabụ m na-enyocha ihe dị na akaụntụ google m ka ị wee hụ na enweghị m okwuntughe ebe a, mana na ihe nchọgharị ahụ enwere m okwuntughe ndị a ugbu a aga eme ka mmekọrịta wee hụ ma okwuntughe ndị a mekọrịta site na ihe nchọgharị m na akaụntụ google m ka anyị laghachite ebe a ma mee ka mmekọrịta wee chere oge maka okwuntughe gị iji gaa google Account iji mekọrịta. Ka anyị hụ ma enwere m okwuntughe ndị a na akaụntụ google m, ee enwere m ha azụ na akaụntụ google m ka m nwee ike mekọrịta ozi a na ngwaọrụ ndị ọzọ na gam akporo ma ọ bụ laptọọpụ m.
Echere na ozi a na-enyere gị aka ma isiokwu a enyerela gị aka ịnweta ma ọ bụ weghachite okwuntughe gị na akaụntụ google gị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka edemede a kesaa ma denye aha na ọwa m, daalụ!
Kedu ihe mere ibe m Ibe Yahoo?
Gịibe edokọbaraechekwara na nnọchite gị site naYahoo.Yahooadịghị enweta gịibe edokọbaramaka ebumnuche ahịa ọ bụla.
- Nwoke, Obi dị m ezigbo ụtọ na YouTube ka dị, n'ihi na ebee ka Baldo dị ka m ga-eji nnukwu ụlọ ọrụ dị ka nke a rụọ ọrụ, ọ bụ? E nwere ọtụtụ weebụsaịtị ndị anyị na-ewu ewu nke anyị na-eji kwa ụbọchị, ihe ndị dị ka Instagram na Facebook, na n'ihi na anyị na-eji ha oge niile, anyị anaghị eche n'echiche banyere ụwa na-enweghị ha, ma ọ bụ ụdị ndụ dị n'ihu ha. Mana ihe nwere ike ịgbanwe n'oge ọ bụla, dịka saịtị anyị na-eji kwa ụbọchị, saịtị ndị dị na ndepụta a bụ ndị ama ama otu ụbọchị wee nwụọ kpamkpam. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) (ọchị ọjọọ) Ndị a bụ weebụsaịtị ndị ama ama 10 nwụrụ. (Obi ụtọ na-adọrọ adọrọ) ​​Music 10 bụ Altavista. (Obi ụtọ na-atọ ụtọ) Tupu Google aghọọ onye nyocha ọ bụla, Altavista bụ onye ama ama.
Amalitere na 1995, Altavista kwere ka ndị ọrụ weebụ chọta ọdịnaya ngwa ngwa na ntụkwasị obi. O nwere ngosiputa nke webusaiti na, imata, ihe igwe injin ya bu. Mana gịnị ka Altavista mere tupu injin nchọta ndị ọzọ na ọ nwere onye ntanetị dị elu dị ka Spider-Man, ọ bụ okwu teknụzụ.
Nọnyere m ụmụ okorobịa. A web crawler bụ bot nke na-awagharị na ntanetị na-achọ weebụsaịtị ka ọ bụrụ na mgbe ndị ọrụ google, m na-ekwu Altavista okwu ọchụchọ, ozi gbasara weebụsaịtị ndị ahụ dị n'aka. Agbanyeghị, na 2003 Altavista bidoro ịbelata wee nwee ike ịchịkwa Google, nke a dị ezigbo mma n'ihi na ọ nweghị onye ga - asị, ee, ọ bụ naanị Altavista.
Yahoo zụtara Altavista mana tụfuo ụlọ ọrụ ọchụchọ weebụ ochie ma jiri nke ha. debe akara. Ma dịka ị nwere ike iche n'echiche, nke ahụ emeghị nke ọma ebe ọ bụ na ndepụta ahụ, yana na 2013 Altavista mechiri nke ọma.
Nọmba itoolu bụ Enyi Enwekọrịrị Netwọk bụ mgbanwe, mana ogologo oge tupu titans dị ka Twitter na Facebook pụta, obere websaịtị UK gbalịrị echiche ahụ. Akpọrọ ya Enyi Enweghachi ma nyekwa ndị ọrụ ohere ịbanye na netwọkụ dabere na ụlọ akwụkwọ ha gara. Nke a mere ka ndị chọrọ ịhụ ihe pals ha na-eme.
Mgbe ebe nrụọrụ weebụ US gara aga a na-akpọ classmate.com rụrụ ọrụ yiri nke ahụ, Ndị Enyi Enweghachiri were ya na ọkwa ọhụrụ. N'ime afọ ole na ole, o nwere ihe ruru nde ndị ọrụ atọ wee zụta ya maka $ 208.
Kedu onye jiri ego ahụ mee ihe a? Mana n’agbata afọ 2007 na 2008, 47% nke onye ọrụ ya furu efu. N’atughi anya, Facebook emeela ka okporo ụzọ ya bawanye na UK n’ihe dịka 2400%. N'ikwu eziokwu, anaghị m ata ha ụta maka enweghị ịhụ Facebook dị ka ihe iyi egwu n'ihi na akpọrọ ya Facebook.
Ọ dịka ịtụ otu ụlọọrụ a na-akpọ Leg At ụjọ. Nọmba asatọ bụ Ahịa Yahoo. (upbeat instrumental music) Yahoo Auctions e hiwere afọ atọ mgbe eBay, na 1998 aka eze nke auction saịtị.
Dịkwa ka eBay, ahịa ndị Yahoo mere ka ndị ọrụ depụta ihe ndị ha chọrọ ire. N'oge ahụ, Yahoo bụ ụlọ ọrụ na-ebili na otu n'ime aha kachasị na ịntanetị, mana eBay enweelarị mmalite ma ya niile wepụtara ụzọ ntụkwasị obi na ntụkwasị obi iji zụta ihe n'ihi usoro ọkwa ya. Mana Yahoo kwụsịrị ọtụtụ ọrụ na America na mba ndị ọzọ site na 2007.
Mana kwenye ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ndị ọrụ nwere ezigbo mmechuihu n'ezie ka weebụsaịtị ahụ enyeghị ndepụta ego. N'adịghị ka eBay n'oge ahụ. Mana ọ na-enwetakarị onye ọbịa n'ihi na mgbe ahịa ndị Yahoo mechiri ya UK na ọrụ Irish na njem dị egwu, ọ kwadoro onye isi ya.
Yahoo kwuru na eBay bụ ọrụ ha kachasị amasị ha yana ndị ọrụ na-achọ ihe yiri ahịa Yahoo, ọ ga-eji ya. Dị ka ịkwụ ụgwọ, oh, mana nke ahụ abụghị nke azụmahịa m. Nọmba asaa bụ Nupedia. (upbeat instrumental music) Nupedia bụ akwụkwọ nkà ihe ọmụma dị n'ịntanetị nke nyere ndị ọrụ ohere ịchọ ọtụtụ isiokwu metụtara ntutu mweghachi.
Nupedia nọrọ naanị afọ anọ dị mkpirikpi n'etiti 1999 na 2003 na, n'adịghị Wikipedia, nwere usoro nyochara nke ndị ọgbọ. Afọ ofufo nkwado dere isiokwu na họrọ isiokwu ma ọ gaghị ndụ ozugbo. ely.
Ha gha ebu uzo nyocha ya. Echiche bụ na nke a ga-eme ka ọkwa dị mma dị ka akwụkwọ akụkọ bipụtara. O di nwute, naanị ihe ederede 21 gafere usoro nyocha nke ndị ọgbọ na afọ mbụ.
Ugbu a, ka anyị jiri nke ahụ tụnyere Wikipedia, nke bipụtara ugboro iri na ọnụọgụgụ na ọnwa mbụ naanị. Yabụ ee, ị nwere ike ịhụ ihe kpatara o jiri bụrụ onye a ma ama na Nupedia enweghị. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ meghere ụzọ maka Wikipedia, yabụ ka anyị bulie otu iko ebe nchekwa Nupedia.
Ọ gwụla ma ị nwere nsogbu ị drinkingụ mmanya, na nke ọ ga-abụ echiche dị njọ. Nọmba isii bụ Vid Me. (Upbeat instrumental music) YouTube na -ekekọrịta ederede ịkekọrịta, yana ọ bụ ezie na ọtụtụ weebụsaịtị gbalịrị i mimomi ihe ịga nke ọma ya, ihe ka ọtụtụ dara, nke bụ otu n'ime mgbalị ndị kachasị ọhụrụ ime ya.
Site na YouTube igbochi ikike YouTubers inweta ego site na mgbasa ozi n'ihi oke esemokwu na saịtị ahụ, Vid Me, tọrọ ntọala na 2014, batara wee nye YouTubers ụzọ ọzọ iji nweta ego site na edemede ha, mana yana ọdịnaya nke ọdịnaya dị mwute emechibidoro webụsaịtị ahụ na Disemba 1st, 2017. Nke a bụ n'ihi na enweghị ike ịkwụ ụgwọ maka ịnabata ọtụtụ nde ndị ọrụ emepụtara site na mgbasa ozi ha ma ọ bụ ndebanye aha ha. Mana n'agbanyeghị mmechi ahụ, Vid Me anatawo otuto zuru oke maka opekata mpe ịnye isiokwu nchịkọta Bochum dị iche, na ndị okike isiokwu gara n'ihu ịchọ ụzọ ndị ọzọ iji bulie ahịa ha, n'adịghị ka m, ihe niile dị mma.
Ego mgbasa ozi dị mma, anaghị m echegbu onwe m, anaghị m echegbu onwe ma ọlị, nọmba nke ise bụ Bebo. (Upbeat instrumental music) Bebo malitere na 2005 ma bụrụ nnukwu usoro mgbasa ozi mmekọrịta na-aga nke ọma ruo ọtụtụ afọ. Saịtị ahụ ama ama n'ọtụtụ mpaghara, yana ihe karịrị nde mmadụ iri na UK naanị.
Dika onu ogugu ha bilitere, Bebo weputara nnukwu aha ndi ulo oru ma zuta ya maka $ 850 na 2008. Ihe mere ka Bebo ghara idi iche n’egwuregwu ya bu na ihe omuma nke ndi mmadu bu ihe omuma na ndi mmadu. N'ebe nrụọrụ weebụ mgbasa ozi nke oge a, profaịlụ Bebo nwere ike ịdị iche.
N'ụzọ dị mwute, juggernaut Facebook, nke gburu ọtụtụ saịtị na ndepụta a, kụrụ Bebo n'ala maka ọnụ ọgụgụ atọ ahụ, mana akara ahụ gafere n'ezie, ndị guzobere ya gbalịrị ọtụtụ ugboro iji weghachite akara ahụ. Ah, echegbula, obere Bebo. Ga-aga ebe ahụ otu ụbọchị obere enyi.
Number nke anọ dị ụtọ. (Obi ụtọ instrumental music) Dị ka ọtụtụ nke saịtị na ndepụta a, atọ ụtọ bụ otutu na-atụ echiche ma nwere ike na-agaghị anọ n'ihu nke usoro ruo mgbe ebighị ebi. Dị nnọọ ka StumbleUpon na Pinboard nke bịara mgbe, atọ ụtọ ka ọtụtụ ndị mmadụ echiche nke na-elekọta mmadụ bookmarking.
Nke a nyeere ndị ọrụ aka ime ka ọdịnaya dị n'ịntanetị dị ụtọ ma dị mfe inweta. Mgbe ewepụtara ya na 2007, Delicious abịawo ogologo oge, mana na mbata igwe ojii na ndị mmadụ nwere ike ịchekwa ibe ha na ngwaọrụ na ihe nchọgharị, Delicious ghọrọ ụdị enweghị isi na 2017 site na onye mpi Pinboard, nke mechara kwụsị ọrụ ahụ , iji kwalite weebụsaịtị nke ya na Delicious user base. Um, Udiri onye ọrụ.
Nke ahụ gaara abụ abụbido okwu anyị. Ndị ọrụ anyị na-atọ ụtọ. Nọmba atọ bụ Geocities Instrumental Music) Amalitere na 1994 ma bụrụ nke akpọrọ Beverly Hills Internet, Geocities ghọrọ weebụsaịtị nke atọ kachasị ewu ewu n'ụwa na 99, ee ee ka anyị mee ya.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị mepụtara mkpokọta weebụ banyere ụlọ ọrụ ntụrụndụ, a ga-etinye ya n'obodo Hollywood ka ndị nwere mmasị na isiokwu ị họọrọ nwere ike ịchọta ọdịnaya gị. Ọfọn, oge na-agbanwe na ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ na-asọmpi ewepụtala ọtụtụ ụzọ nwere ike ịnweta na ọkachamara iji mepụta mkpokọta. Geocities mechara mechie ihe nkesa na United States na Ọktoba 2009, kwere ya ma ọ bụ na ọ bụghị, 38 Nde nde mmadụ mepụtara websaịtị ọ ga-efu.
Zuo ike na Udo, Nnukwu Akuko Akuko. Number abụọ bụ Gawker. (Upbeat instrumental music) Gawker bụ ndị Nick Denton na Elizabeth Spiers guzobere ya bụ blog nke kpuchiri ndụ ndị ama ama.
O buru ụzọ mee akụkọ na mpaghara Manhattan nke New York mana n'oge na-adịghị anya ọ gbasawanyere iru ya wee nwee ihe karịrị nde mmadụ iri abụọ na atọ kwa ọnwa, nke ahụ bụ na 2015. Yabụ i nwere ike ikwu, mana mmadụ, gịnị mere? N'oge na-adịghị anya, ọtụtụ nsogbu dakwasịrị na weebụsaịtị a ama ama, ọtụtụ ebubo ebubo nwebisiinka na ntinye aka sitere na isi mmalite ndị ekwesịrị ịbụ ndị isi, mana nke ahụ abụghịdị njọ. Hulk Hogan gburu onye na-egbu egbu n'ezie, ee e, nke ahụ abụghị egwuregwu.
Ọ gbara Gawker akwụkwọ maka ịdebanye eserese nke Hulkster na-enwe mmekọahụ. Oh ee, mana inye gi bummer, nwannem. Kedu ihe ị ga-eme? E nyere ya $ 140 nde na nbibi, na June 10, 2016, a kwupụtara Gawker enweghị ego n'ihi ya.
Na otu onye bụ Myspace instrumental music) Whonye na-echeta Myspace? Ihe ndị ahụ bụ ihe ncheta dị mma. Eleghị anya ọ nwụbeghị, dịka nke 2018, mana Myspace nọ na nkwado nke ndụ ogologo oge. Anyị kwesịrị n'ezie ịpị plọg ahụ ma wepụ ya na nhụsianya ya.
Ee ee, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na saịtị ahụ anwụghị, ebumnuche ebumnuche ugbu a bụ elekere isii. Myspace bụ ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'thatntanet nke bu ụzọ gaa Facebook. Nwere ike biputere profaịlụ gị na Myspace ọbụlagodi enyi gị mbụ nyere Tom.
Tom bụ ngalaba-nchoputa nke saịtị na o doro anya na nnọọ owu. N'etiti 2004 na 2010, ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'socialntanet kasị ukwuu n'ụwa, mana mgbe 2008 bịara anyanwụ malitere ịda na Myspace, Facebook bịara wee gbanwee usoro mgbasa ozi ruo mgbe ebighị ebi. Myspace dị ka oge ochie site na iji ya atụnyere.
Kemgbe ahụ, Myspace aghọwo ebe ikpo okwu maka ndị na-ese ihe na ndị na-egwu egwu iji wuo isi ihe ma na-anakọta nleta nde 50 kwa ọnwa. Ma ka anyi chee ya ihu, o di n’uzo. Ọzọkwa, ị gaghị enwe ike ịbụ enyi Tom.
A na m atụ uche Tom. Ma nke ahụ bụ ya. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị ma chọọ ịhụkwu ya n'ọdịnihu, denye aha na ọwa m ma gbanye ọkwa maka ọkwa ọhụrụ m, ekele maka ilele ma hụ gị n'isiokwu na-esote.
okwu njikọta akara
Kedu ihe mere ndepụta ndị ọkacha mmasị m ji apụ n'anya?
Technipages na-akọwa a dị mfe ngwọta ma ọ bụrụ na gịibe edokwubarammanya ma ọ bụọkacha mmasịmmanya nwereokụredesite na Chrome. ... Ọ bụrụ na nsogbu ahụna-edebena-abịa azụ, ị nwere ike pịa atọ ntụpọ na-aga menu, họrọ 'Ntọala' wee 'Ọdịdị.' Gbaa mbọ hụ na “Gosi ndịibe edokọbarae debere ya.
Ndewo, nke a bụ Sophia! Ke ibuotikọ emi, m ga-agwa gị otú ị ga-esi nweta gị Safari ibe edokọbara azụ ma ọ bụrụ na ha na mberede na-apụ n'anya. Echefula ịdenye aha na ọwa anyị maka ndụmọdụ ndị ọzọ! Nhọrọ 1: Naghachi site na Ọbá akwụkwọ edokọbara na Finder Otu n’ime ihe mere ibe edokwubara gị nwere ike ịdị na-efu bụ n’ihi nrụrụ aka nke faịlụ .plist - ndị a bụ ụfọdụ akwụkwọ na-ejide data ibe edokọbara gị na nchekwa Safari.
Iji weghachite emerụ .plist faịlụ mkpa ka ị: Mepee Finder na-aga gị Mac nchekwa → Macintosh HD. Pịa Iwu (⌘) + Mgbanwe +. (Oge) iji gosi nchekwa na faịlụ ezoro ezo.
Uzo mkpirisi di na macOS Sierra. Maka nsụgharị ochie nke sistemụ arụmọrụ, gaa na Terminal ma gbakwunye chflags nohidden ~ / Library iji nweta faịlụ ndị ahụ. Pịa na 'Gaa' na menu dị n'elu ihuenyo ahụ wee họrọ 'Gaa na nchekwa'.
Tapawa na ~ / Library / Safari / Bookmarks.plist wee pịa Tinye ka imepe faịlụ ndokwa ibe. Mgbe ị na-ejide igodo nhọrọ, dọrọ faịlụ Bookmarks.plist gaa ebe ọzọ na Mac gị.
Nke a na - emepụta otu faịlị ahụ na - echekwa nke mbụ na ebe ọ nọ. Nhọrọ 2: Weghachi Safari ibe edokọbara si Time Machine Time Machine bụ Apple si ngwá ọrụ maka nkwado na Iweghachi gị data, gụnyere ọkacha mmasị na Safari. Nke a bụ otu ị ga - esi chọta ya ọzọ na Time Machine: Buru ụzọ gosi folda ọba akwụkwọ zoro ezo na Finder, dịka akọwara n'elu.
Site na menu n'elu ihuenyo ahụ, pịa Gaa na họrọ Gaa na nchekwa. Tapawa na ~ / Library / Safari wee pịa Tinye ka imepee nchekwa Safari zoro ezo. Mepee Oge Igwe, mepụta Chakwasa ihie (Ctrl (Iwu) + Spacebar) wee banye Oge iji chọta ngwa ahụ.
Ugbu a ị nwere ike ịchọgharị na nchekwa Safari zoro ezo site na ịgagharị n'oge dị iche iche. Chọpụta mgbe i chere na ehichapụ ibe edokọbara gị. Right-pịa na ibe edokọbara file ma họrọ Weghachi si ndọpụta menu.
Tụgharịa iCloud Ibe edokwubara ma melite ngwanrọ gị Nhọrọ 3: Naghachi ndokwa ibe Safari na iCloud from nwere ike ịnweta ibe edokọbara gị furu efu site na iCloud. Naanị jide n'aka na arụ ọrụ ya na ngwanrọ gị dị ọhụrụ. Ochie MacOS nwere ike ime ka usoro njehie ga-eme ka gị Safari ibe edokọbara akwụsị.
Iji weghachite ibe edokọbara gị site na iCloud: Gaa na menu Apple → Mmasị Sistemụ. Maka macOS Big Sur, họrọ Apple ID, wee gaa iCloud. Na nri aka nri, lelee igbe dị n'akụkụ Safari.
I nwekwara ike wepu ibe edokọbara site na ebe nrụọrụ weebụ iCloud. Banye na akaụntụ gị na-aga gị ntọala akaụntụ. Pịgharịa gaa na ala nke ibe ahụ ma chọọ isi 'Elu' n'isi ala aka ekpe.
Pịa na 'Weghachi Ibe edokwubara' iji lelee njikọ niile ehichapụ n'oge na-adịbeghị anya. Nhọrọ 4: Lelee njikọ Ifntanetị gị ọ bụrụ na Mac gị nwere njikọ badntanetị na-adịghị mma, iCloud anaghị emekọrịta nke ọma. Otu esi lelee ya: Kwụsị ihe nchọgharị ahụ ma meghee ya ọzọ.
Gaa na weebụsaịtị ma ọ bụ chọọ ihe. Lelee njikọ WiFi gị. Gaa na menu Apple Pre Mmasị sistemu → Netwọk - chọọ nkwenye nke ọnọdụ WiFi.
Nhọrọ 5: Lelee Akaụntụ Akaụntụ Gị Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ NJ Apple na enweghị ike ịhụ ibe edokọbara gị na otu ngwaọrụ, ọ nwere ike ọ bụghị n'otu netwọk Apple ID. Iji lelee nke a, gaa na menu Apple ferences Mmasị usoro → iCloud. N'ihi na MacOS Catalina, na-aga Apple ID na System Mmasị kama.
Nhọrọ # 6: gbanyụọ ibe edokọbara iCloud ma gbanwee ha. Ibidogharịa iCloud ga - emekọrịta data ahụ ma weghachite ndokwa ibe gị furu efu. Iji malitegharia mmekọrịta Safari gaa na menu Apple → Mmasị sistemụ → iCloud wee wepu igbe dị n'akụkụ Safari.
Chere sekọnd ole na ole wee lelee igbe ahụ ọzọ. Na macOS Catalina ị nwere ike ịchọta ntọala ndị a na ngalaba 'Apple ID'. Nhọrọ 7: Malitegharịa ekwentị gị na kọmputa Restmalitegharị Mac gị nwere ike idozi ọtụtụ nsogbu, gụnyere ịpịpụ ibe Safari na-efu efu.
Mepee Apple menu ma họrọ Malitegharịa ekwentị. I nwekwara ike mechie kpamkpam ma malitegharịa Mac gị. Ọ bụ ya! Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, ndị MacKeeper nkwado otu dị 24/7.
Abụ m Sophia si MacKeeper, ekele maka ikiri.
Kedu ka m ga-esi weghachi ọkacha mmasị m?
Ọ bụrụ n ’ị gbachapụ aibe edokwubarama ọ bụibe edokwubarafolda, ị nwere ike see Ctrl + Z na windo Ọbá akwụkwọ ma ọ bụ Ogwe aka Ibe edokwubara iji weghachite ya. Na windo Ọbá akwụkwọ, ị nwekwara ike ịchọta iwu Wepu na menu 'Hazie' menu.
Ọ bụrụ na kọmputa Windows 10 gị kwụsịrị ịrụ ọrụ mgbe ị wụnye mmemme ma ọ bụ melite, ị nwere ike ịchọrọ ka ọ nwee nnukwu bọtịnụ, ọ na-akpọ ya ma weghachite ya na isiokwu a aga m egosi gị otu esi eji ya, nke a bụ Dave si tech nnapụta Ọfọn m dozie Your Computer, Internet, na Technology Nsogbu ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ m, na-ahapụ ya na-aza ajụjụ n'okpuru na m ga-eme m kasị mma enyemaka zaa ha. Dị njikere ịdenye aha na isiokwu m ọzọ ebe m nwere ike ịza ajụjụ gị Ajụjụ taa Kọmputa m kwụsịrị ịrụ ọrụ Ọ dị mma tupu Windows arụnyere mmelite kachasị ọhụrụ Kedu ka m ga esi nweta ya ọzọ? Nwere ike ọ gaghị aghọta ya, mana Windows na-eme atụmatụ mgbe niile mgbe ọ bụla ị wụnye mmemme ahụ, nsogbu ndị siri ike dị ka kọmputa na-akwụsị n'enweghị ihe kpatara ya ma ọ bụ na ị ga-enweta ozi njehie dị iche mgbe ahụ ị kwesịrị ịlaghachi elekere mgbe enwere foto ahụ. ihe niile kwesiri ịrụ ọrụ ọzọ. A na-akpọ ya System Weghachi na ọ na-echebe gị mgbe ị wụnye mmelite ma ọ bụ ngwaike ọhụrụ, dịka: B. mgbe ị na-agbakwunye ngwa nbipute.
Youkwesighi ichegbu onwe gị maka ịhapụ akwụkwọ ọ bụla ma ọ bụ faịlụ onwe gị dị ka sistemụ sistemụ agaghị emetụta ha, agbanyeghị ọ bụrụ na kọmputa gị na-enwe nsogbu dịka ndị a, ọ bụ ezigbo echiche ịche maka ịme nkwado ma ọ bụrụ na ịnweghị otu. E nwere ụzọ dị iche iche iji banye na weghachite sistemụ dabere na ma ị nwere ike ịmalite kọmputa gị ma ọ bụ na ị gaghị. Aga m egosi gị ụzọ abụọ ahụ, m ga-egosikwa gị otu esi elele ma ọ bụrụ na System Restore na-echekwa kọmputa gị ebe ọ bụ na ị maghị mgbe ị ga-achọ ya tupu ịmalite bido wepu ihe ọ bụla ị gbanyere na nso nso a Ọ bụrụ na ị arụnyere ngwaike ọhụrụ, dị ka kaadị eserese ọhụrụ, kwụpụ kọmpụta ahụ site na ike ma wepu ngwaike ọhụrụ mgbe Windows bidoro mana ị ga-enweta ozi njehie dị iche ma ọ bụ ihe mgbaàmà ndị ọzọ, mgbe ahụ ị nwere ike ịnweta sistemụ Weghachi mbụ na Windows.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịmara na ị wụnye mmemme na nso nso a, ọ ga-adị mma iwepu mmemme ahụ wee hụ ma ọ dị iche. Ka anyị ngwa ngwa lee ka esi ewepu mmemme. Jide n'aka na ị mechiri ma chekwaa ihe niile meghere wee pịa na mmalite menu wee pịa ntọala, nke a bụ akara ngosi gia wee gaa na ngwa ị ga-ahụ ndepụta nke ngwa niile na kọmputa gị ị nwere ike idozi ndepụta ahụ site na ụbọchị pịa na ụdị ma họrọ ụbọchị echichi ọhụrụ ngwa ọdịnala kwesịrị ịbụ n'elu, ọ bụrụ na ị na-enyo nke ọ bụla n'ime ha kpatara nsogbu gị ị nwere ike họrọ ya na kụrụ iwepụ m ga-egosi gị nke a dịka ọmụmaatụ enweghị m nsogbu na ngwa a mgbe ahụ ị kwesịrị Malitegharịa ekwentị ahụ ma hụ ma edozi nsogbu ahụ, ọ bụrụ na ị ka nwere otu nsogbu ahụ, ị ​​ga-emepe SystemRestore, pịa menu mmalite ma ọ bụ Cortana wee pịnye mgbake mgbe ị hụrụ mgbake, pịa Sistem weghachite kwesịrị ịpụta wee mee ka ị mara mgbe mmemme ọ bụla ma ọ bụ mmelite kachasị ọhụrụ dị e arụnyere.
Ọ bụ ezi echiche ịmalite site na iji weghachite, mana m ga-egosi gị otu esi ahọpụta isi ihe niile weghachite. Ya mere, pịa na nhọrọ ọzọ, Họrọ ebe dị iche iche weghachite wee pịa Na-esote iji hụ isi ihe weghachite n'oge na-adịbeghị anya ọzọ ị ga-ahụ ma ọ bụrụ na enwere isi ihe ndị ọzọ weghachite site na ịpị igbe a n'okpuru. Ọ dị ka kọmpụta m mepụtara ụfọdụ ihe nkwụghachi n'ime izu ole na ole gara aga enyemaka, enwere ihe ndị ọzọ anyị nwere ike ịnwale, mana ugbu a, m ga-ahọrọ ebe mweghachi kachasị ọhụrụ wee pịa Na-esote Ugbu a, lee akara aka n'okpuru ma ọ bụrụ na ị nwere obi ụtọ pịa Emechara gụọ ozi a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu pịa Ọzọ mgbe ahụ kọmputa gị ga-aga na ihuenyo dị ka nke a, ị ga-echere oge maka usoro iji weghachi ya ihe dị ka nkeji 25 na kọmputa m Ọ bụrụ na ọ mere, ị ga-enweta ọkwa ma ịchọrọ Ọ bụrụ na sụgharịrị sistemụ nwere ihe ịga nke ọma ma ọ bụ na ọ bụghị, ị nwere ike pịa ya, ọ bụrụ na iweghachite emeghị ihe ọ bụla, ịnwere ike imeghe Sistemụ weghachite ọzọ wee họrọ ebe dị iche iche weghachite, pịa Họrọ Ebe Mweghachi Ọzọ wee pịa ọzọ na mgbe ahụ na-ekwu Ọ bụrụ na ị tinye ihe weghachi ihe mgbe niile i nwere ime bụ na-agbalị ọzọ weghachi ebe ọ nwere ike na-arụ ọrụ site na ha niile ruo mgbe ị na-ahụ onye na-arụ ọrụ.
Ihe m chọtara bụ weghachi sistemụ nwere ike ịgwa gị oge ụfọdụ na nke a dara, mana ọ dị ka edozila nsogbu ahụ. Mgbe nke ahụ mere, ịnwere ike iche na ọ rụrụ ọrụ mgbe ịmechara sụgharịrị sistemụ, nke na-abụkarị ụzọ dị mma iji chọpụta ihe kpatara nsogbu ahụ site na ịlele akara nke usoro weghachite usoro nke na-arụ ọrụ. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike ịwụnye ma ọ bụ melite ngwanrọ na oge nke abụọ ọ na-arụ ọrụ, mana ọ bụrụ na ị nwere otu nsogbu ahụ oge nke abụọ ịchọrọ iji sistemụ weghachite iji tọgharịa ya yana ị ga-achọpụta ma ọ bụrụ na enwere nsogbu na ihe ị na-anwa ịwụnye, ugbu a, anyị ekpuchila usoro ntọala weghachite yabụ ugbu a, anyị nwere ike ilele ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na kọmpụta agaghị amalite, ọ bụrụ na kọmputa gị agaghị amalite ị ga - ahụ na ọ na - edozi ya na - akpaghị aka ọ na-anwa ịchọpụta ma dozie nsogbu ahụ Ọ bụrụ na mmezi akpaaka enweghị ike idozi nsogbu ahụ, ihuenyo a ga-apụta.
PC gị amaliteghị nke ọma. Ugbu a ịkwesịrị ịnwale sụgharịrị sistemụ. Nwere ike banye na Sistem weghachite site na ịpị 'Advanced Options'.
Wee pịa 'Troubleshoot' na 'Advanced Options'. na itinye paswọọdụ gị. Ọ bụrụ na otu n'ime akaụntụ njirimara gị bụ onye nchịkwa, ị kwesịrị ịdebanye dị ka onye ọrụ ahụ mgbe sụgharịrị usoro malitere Pịa Ọzọ ugbu a ị nọ n'otu ihuenyo dị ka akụkụ mbụ nke isiokwu a.
Họrọ ebe weghachite site na listi ma soro ntuziaka na ihuenyo. Mgbe usoro weghachite zuru ezu, ị ga-enwe ike ịmalite kọmputa gị dịka ọ dị ka anyị na-ele anya na weghachite sistemụ, ma ọ bụrụ na SystemRestore na-echebe ya, mepee File Explorer wee pịa a PC, nri pịa ya na pịa Njirimara pịa Nchedo System. Chọọ maka igbe ntọala nchedo ma hụ na agbanwuru nchebe maka draịvụ ike gị, ọ bụrụ na ọ dịghị mma, ịnwere ike imechi windo ndị a niile ugbu a.
You nwere ike zuru ike na kọmputa gị ga-ike weghachi ihe mgbe ọ dị mkpa iji mee ka usoro weghachi maka gị. Mee ka m mara ka ị si mee ya na nkwupụta ndị dị n'okpuru ebe a ma ọ bụrụ na ịchọtare isiokwu a bara uru biko nye ya mkpịsị aka gị ma ọ bụrụ na ị ga - achọ ịhụkwu nkuzi sitere n'aka m, pịa ihu m n'okpuru wee pịa bọtịnụ na - acha uhie uhie. Ọ bụrụ na ịnọ ebe a, biko lelee otu edemede m ọzọ, dịka.
B. Otu esi akwado komputa Windows 10. Daalụ maka ikiri na ịhụ gị oge ọzọ
Etu esi ehichapụ ibe edokọbara na Yahoo?
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ihichapụ ibe edokọbara, ị ga - eme ya site n’itinye igbe dị n’akụkụ ibe edokọbara ịchọrọ ihichapụ, wee pịa na Hichapụ bọtịnụ. Mgbe ị jiri Ibe edokọbara Yahoo, ị dabere na Usoro Ọrụ Yahoo. Biko lee Yahoo Bookmark Enyemaka ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ọrụ a.
Ebee ka m ga achọta ibe edokọbara m na Firefox?
Iji nwetaghachi ibe edokọbara na mbụ na nchịkọta nhọrọ Ibe edokwubara ma ọ bụ na ogwe aka Ibe edokwubara mana ha na-efu efu ugbu a, ị nwere ike weghachite ha na otu n’ime nkwado ndabere a: Pịa bọtịnụ Ọbá akwụkwọ na ogwe aka gị. (Ọ bụrụ na ịhụghị ya ebe ahụ, pịa bọtịnụ menu wee pịa Ọbá akwụkwọ.)
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ndokwa ibe gị funahụ gị na Google Chrome?
You'll ga - ahụ ibe edokọbara ehichapụrụ gị mgbe ị megharịrị Chrome. Ibe edokọbara ọ bụla ị mepụtara kemgbe oge ikpeazụ ị malitere Chrome ga-efu. Ọ bụrụ na ịchọtaghị ndọtị faịlụ .bak ma hụ faịlụ abụọ aha ya bụ Ibe edokwubara, gbalịa ịgbanwe ntọala iji lelee nhọrọ 'Aha aha ndọtị'.
Ebee ka echekwara ibe m Yahoo na kọmputa m?
Yahoo na edobe ibe ibe gi n'aha gi. Yahoo anaghị abanye na ndokwa ibe gị maka ebumnuche ahịa ọ bụla. Ị nwere ike idezi ndokwa ibe gị n'oge ọ bụla site na ịpị na pensụl na akara ngosi na-esote na nchekwa ị chọrọ dezie.